ဂျာမန် Portillo | | ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေး, အီကောလောဂျီ
အ အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်များ အိမ်မှာဖြစ်စေမြို့ပြဥယျာဉ်လို့လည်းခေါ်ကြတာကအရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ သူတို့နှင့်အတူသင်သည်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများအတိုင်းအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုရိုးရှင်းသောလှေကားထစ်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်ဥယျာဉ်တွင်ရနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုအော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်တစ်ခုတွင်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်အထူးသဖြင့် ၀ န်ထမ်းများလိုချင်သူများအတွက် ပိုမို၍ တိုးချဲ့ပျံ့နှံ့နေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည် အစားအစာအပေါ်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှု စားသည်
အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်တစ်ခုတွင်အစာကြီးထွားရန်သင်စိုက်ထားသောမြေအမျိုးအစား၊ သင်၏မြေကွက်သို့မဟုတ်မြေပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်နေရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်၊ မြေဆီလွှာစိုထိုင်းမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကဲ့သို့သောအချို့သောအေးဂျင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ယခုနှစ်အချိန်တိုင်းတွင်မျိုးစေ့အမျိုးအစား။ ကောက်ပဲသီးနှံများတွင်ကပ်ဘေးတစ်မျိုးမျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့အားတိုက်ထုတ်ရန်သဘာဝကုစားမှုများရှိသည် ဇီဝကမ္မဗေဒ.
ကားလို့စ် Calvoအော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ Juanjo Sanchez စိုက်ပျိုးသောကလေးများနှင့်လူကြီးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် "Seed Box"။ ဤစီမံကိန်းသည်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပုံစံသုံးမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာဥယျာဉ်တွင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာဥယျာဉ်တွင်ဖြစ်သည်။
ယခင်ကမြို့ပြဥယျာဉ်သည်စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိသောwasရိယာဖြစ်ပြီးမြို့တော်ကောင်စီကသင့်အားငှားရမ်းရန်တောင်းခဲ့သည်၊ သို့မှသာသင်သည်ထိုမြေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ မည်သည့်အာကာသတရားဝင်သည် အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များရရှိရန်ဖြစ်သည်။
Calvo ၏အဆိုအရ Seed Box သည်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအားကမ္ဘာမြေနှင့်အထူးနှောင်ကြိုးဖွဲ့ရန်သင်ကြားပေးသည် -
“ လူတွေနဲ့သဘာဝတရားအကြားစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအနှောင်အဖွဲ့တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှာရှိနေတဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားတွေကိုထုတ်လွှင့်နိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်” ဟုသူကထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကိုမပေးသော်လည်းမည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုဖြေရှင်းလိုကြသည် သံသယသို့မဟုတ်သိချင်စိတ် ".
ထို့ကြောင့် Seed Box သည်မြို့ပြဥယျာဉ်များတိုးချဲ့ရန်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးကိရိယာများကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးအော်ဂဲနစ်လယ်သမားကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းလေ့ကျင့်သူများကိုသတိပေးသည်။ မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများမသုံးပါ အရာအားလုံးသဘာဝဆေးတစ်လက်ရှိပါတယ်ကတည်းက။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » အီကောလောဂျီ » သင်၏ကိုယ်ပိုင်အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်ကိုအိမ်တွင် ထား၍ အစားအစာကိုထိန်းချုပ်ပါ